nyowani ipad pro 2018 mutengo uye zuva rekuburitsa zvinotarisirwa
Kuru Nhau & Ongororo Nyowani iPad Pro 2018 mutengo uye zuva rekuburitsa zvinotarisirwa
Nyowani iPad Pro 2018 mutengo uye zuva rekuburitsa zvinotarisirwa
Apple iri kusimukira kuti izivise zvakanyanya zvePadad kugadzirisazve zvayakaita kubvira, zvakanaka, kubvira. Yakaenda yese pamwe nekukwidziridzwa dhizaini gore rino, ichikanda siginecha yayo pamba kamwechete uye kune vese kune avo vese maApple madivaysi kusvika parizvino, uye iyo nyowani iPads haigone & apos; t ive anosarudzika, zvinoita. Iyo nyowani iPad Pro 12.9 'uye 10.5' mamodheru anozokandawo kiyi yeiyo TrueDepth kamera kit yakamisikidzwa mune yakadzikira bezels, senge ese matatu matsva maPhones ane Face ID yekuvhura iwo.
Kutenda kune mamwe masikirwo akadhirowewa takagadzira nyowani iPad 2018 renders iyo inoratidza kuti mativi akakombama echirimwa chiripo anozotsiviwa nemamwe akasimba, uye iwo mabhezuru anodzikira zvakanyanya kutenderedza, akaiswa symmetrically pakati pekona nemipendero. Iyo yekuratidzira ine yakakomberedza makona senge pane notch-y iPhones, asi notch haina kwese kunowanikwa, nekutenda, uye, pane zvese, iyo nyowani iPad Pro inotaridzika slabb-y uye nerudzi rwemaindasitiri kukwirira pamusoro pazvino vhezheni.
Chinhu chete chinoramba chiri chakavanzika, zvisinei, doohickey inotaridzika kunge mapini ekumisa emhando, padyo nechaji yekuchaja. Chinotarisirwa parizvino ndechekuti iyi ndiyo Smart Connector yakaendeswa ipapo kuti iwedzerwe mashandiro kana iyo iPad yakamiswa mumifananidzo yemifananidzo, asi isu & maapuro; tichaona izvo chaizvo Apple zvaireva munguva pfupi iri kutevera.
Iko kune zvakare isinganzwisisike elliptical bhatani-rinotarisisa kana tireyi chinhu kune kurudyi pane mavhoriyamu makiyi aripo, ane chinangwa chisati chafungidzirwa kana kuburitswa. Kanda mumatauri mana emakona uye zivisa kudzoka kwemitsetse yeantena kumagumo ese, uye ichi chingangodaro chiri chiitiko chinonakidza kwazvo kune iyo IP mutsara mune imwe nguva.
Nyowani iPad Pro 2018 mutengo
Pano panouya mubvunzo wekutsikirira - Apple ichabhadharisa zvakadii dhizaini nyowani, uye, sezvingabvira, inovandudzwa vekunze? Mushure mezvose, kana nhoroondo iri chero chiratidzo, isu tinotarisira kuti Apple A12X Bionic chipset inogara mukati, uye iyo yese ' chaicho Photoshop pane iyo iPad 'chivakwa hachizowani & apos; ngachiuye zvakachipa, chero.
Iyo yemazuva ano kirimu yechirimwa chePadad, iyo 12.9 'Pro vhezheni inogona kuenda nzira yese kusvika pamadhora 1279, asi izvo ndezve zvakabikwa zvakanyanya, 512GB vhezheni ine nhare yekubatanidza. Iyo diki, 10.5 'Pro modhi, inotanga ne $ 649 chete, kune rumwe rutivi, kune yakakosha 64GB modhi ine Wi-fi chete. Apple yakasimudza mitengo yezvinhu zvese neiyo TrueDepth kamera module, uye iyo nyowani iPad Pro 2018 mhando dzinogona kunge dzakakunda & apos; ngazvive zvinosarudzika, kunyanya kana chekutanga chekuchengetedza chakasimudzwa zvakare. Nekudaro, isu tinotarisira kuti matengo emitengo ePads ave kuda kuvhurwa muna Gumiguru 30 kuve anotevera.
Wi-fi + nhare
Apple iPad Pro 10.5 '2018 128GB $ 699 $ 829
Apple iPad Pro 10.5 '2018 256GB $ 799 $ 929
Apple iPad Pro 10.5 '2018 512GB $ 999 $ 1129
Apple iPad Pro 12.9 '2018 128GB $ 849 $ 979
Apple iPad Pro 12.9 '2018 256GB $ 949 $ 1079
Apple iPad Pro 12.9 '2018 512GB $ 1149 $ 1279
Nyowani iPad Pro 2018 kuburitsa zuva
Iwo ekupedzisira iPad Pro mamodheru akaziviswa Muvhuro, Chikumi 5, uye akatanga kutumira pavhiki rimwe chete, Chishanu, Chikumi 9. Kana Apple ikatevera nenzira imwecheteyo, iyo nyowani iPad Pro 2018 mamodheru anofanirwa kuburitswa neChishanu, Mbudzi 2, mazuva mashoma mushure mekunge vaziviswa pachiitiko chaGumiguru 30 uye svondo mushure mekusunungurwa kwe iPhone XR. Nekudaro, Apple ichave izere suite nyowani yeiyo nyowani magiya eIOS akashongedzerwa neFace ID kamera kit sisito yekuisira zvinhu kune ese-akakosha kutenga zororo, uye zvinoita sekunge yakatsiga kupwanya ayo marekodhi uye emari marekodhi.
Apple iPad Pro 2018 mhando Chipiri, Gumiguru 30 Chishanu, Mbudzi 2
htc imwe m7 vs galaxy s4
Sei mafoni emafoni eHTC akaenda kubva kune akakurumbira kuenda kuvharika?
Zvaungaita: Root yako Verizon Motorola DROID MAXX, Ultra, uye Mini
Deal: Yese Apple Tarisa Nike + Series 3 mamodheru izvozvi 20% yabviswa
Sevha madhora mazana maviri pane Surface Pro 6 bundle kubva kuCostco
Galaxy Note 20 Ultra ndiyo yekutanga foni ine Gorilla Girazi Victus
Tenga iyo Apple iPhone 5c kubva kuWalmart ne $ 45 pachibvumirano; mutengesi anobvisa Best Buy & apos; s $ 50 dhizaini